Omnify: Kuchengetedzwa kwepamhepo, Kubhuka, uye Kubhadhara Platform | Martech Zone
Kana iwe uri wekurovedza muviri, studio, mudzidzisi, mudzidzisi, murairidzi, kana chero imwe mhando yebhizimusi kwaunoda kuchengetedza nguva, kutora mari, kubata zviyeuchidzo zvevatengi, uye kutaurirana zvinopihwa kune vako vatengi, Omnify ndicho chinangwa chakavakirwa mhinduro yakanangana ne bhizinesi rako rinoda… ungave uri-based kana bhizimusi repamhepo.
Omnify Reservation System
Gamuchira Mabhuku, Kubhadhara & Gadzirisa Mamiririri kubva pawebhu uye nhare. Gadzira zvidhinha zvemitambo inowanika kuburikidza nezuva, buffer nguva, kudzikamisa huwandu hwevanoenda, ipa nhengo-chete kuwana & nezvimwe neOnnify. Zvakare, ita kuti varipo vako vabvumirane ne 'Liability Waiver' vasati vapedza kusunga kwavo.
Omnify Zvimiro Zvinosanganisira:
Imwe kana Multi-Nzvimbo - Gadzira maakaundi akapatsanurwa enzvimbo imwe neimwe, iva nevashandi vakaenzana vanowana nzvimbo dzakawanda, vane makirasi-mapaketi uye nhengo dzinogovaniswa nenzira yaunoda kuti vave.
Vashandi Makarenda uye Online Kuronga - tarisa uye gadzirisa yega masheduleti, gadzirisa varipo, uye gonesa vatengi kudzokorora kana kukanzura sezvinodiwa Omnify inotopa yekumirira-rondedzero yekuzivisa vatengi kana slot yakavhurwa mune yemushandi purogiramu. Omnify zvakare inobvumirana neGoogle Calendars!
Kubhadhara uye Kubhadhara - Gamuchira kubhadhara kubva kune vako vatengi vane huwandu hwePCI inoenderana yekubhadhara magedhi esarudzo. Zvimiro zvinosanganisira kubhadhara kunodzokororwa, kubhadhara gare gare, kumberi-tafura POS, uye yakanangana yekubhadhara maemail eSMS.
Zvemari Kuzivisa uye Kuongorora - Teedzera nekutengesa kunze vatengi, kubhuka, kugara, kudzima, kudzorera, uye mari inofungidzirwa kuti urambe uri pamusoro pebhizinesi rako.
Chikwata Management - Wedzera uye bvisa vashandi vako, gadzirisa mvumo yavo, enzanisa makarenda avo, uye uvazivise pane matsva matsva kana kukanzura nezviyeuchidzo zveemail.
Marketing - Gadzirisa uye gadzirisa maemail ayo anopa zvidzikiso, zviyeuchidzo, uye zvikumbiro zvemhinduro. Omnify zvakare inosangana neZapier kuwiriranisa yako vatengi base uye zviitiko pamwe nekunze kushambadzira mapuratifomu.
Mobile App - Omnify GO, iyo nharembozha yeOnnify ndiyo nzira yakapusa yekutarisa ako mashedhiyo uye varipo. Tarisa ivo mukati uye wochinjazve netepa imwe chete. Iwe unogona zvakare kutumira pakarepo mameseji, kufona, kana kutumira email ivo zvakananga kubva kuapp!
Waivers - Nyore gadzira waivers edhijitari uye uwane mvumo kubva kune vako vatengi. Wese wakasainwa waiver inokusevha nguva, kushanda nesimba, uye mari pamusoro pekubata nekuchengetedza mapepa ekuregedza. Izvi zvinonyanya kukosha izvozvi sezvo mabhizinesi ari kubvumidzwa kudzoka akavhurwa nezvirambidzo pasi pehosha.
WordPress Plugin - Tanga kutengesa zvakananga kubva kuWordPress blog yako kana webhusaiti neOnnify's WordPress Plugin iyo inogonesa kuronga majeti kuti aiswe kurudyi padivi.
Kutama Assitance - Fambisa vatengi vako uye zviripo zvekubhuka kubva pane yako iripo yekubhuka chikuva, kurodha yako data, uye tumira email maemail kune ako vatengi.
Tanga Yako Yemahara Omnify Muedzo
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we Omnify.
Tags: bookingskukanganisagoogle kalendarinzvimbo dzakawandaonline karendakuchengetedza onlineonline kuchengetedza systemkuronga pamhepomatsvakudzosera mariRéservationzvinyorwa zvekumirirawaiiWordPressWordPress kushambadzira pluginWordpress pluginWordpress kuchengetedza